Ngwọta - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
A na-ejikarị eriri Weyer PA6 ma ọ bụ PA12 na njikọ ya yiri WQG, WQGM, WQGDM na ụgbọ okporo ígwè. Ngwaahịa ndị a nwere ezigbo ihe mgbochi ọkụ, na-enweghị halogen, phosphor na cadmium. A kwadoro ha ụkpụrụ European na nke ọkụ na anwụrụ ọkụ, EN45545-2, R22 / R23.
Otu n'ime ahịa anyị bụ mbugo. Afọ ndị a, ụlọ ọrụ mbuli elu toro ngwa ngwa. Weyer tubing na kwesịrị ekwesị na eriri USB glands na-arụ ọrụ nchebe na ụlọ ọrụ a. Ha na-egbochi ọkụ, na-egbochi ịka nká, nwee ezigbo nchekwa IP68 ma ọ bụ IP69k. Anyị merie ndị elu aha si mbuli ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
Afọ ise gara aga, ụgbọ ala ọhụụ ọhụụ gbasaa na China. Anyị nyeere ndị ahịa ahụ aka ịmepụta azịza nchebe niile. Weyer pụrụ iche EMC cable glands na M23 njikọta nabatara na-eji kpamkpam. Ugbu a, anyị ka na-ekere òkè n'ichepụta ọrụ mba ụwa maka mpaghara a.
Ike imeghari ohuru nke eji eme ihe n'uwa dum, oru ngo ike ikuku choro oke nchekwa. Weyer elu n'ibu nchegbu tubing na cable glands nwere ike izute otu larịị nke oru ngo. Anyị conduits, glands na-arụnyere na generator, okpomọkụ-akara igbe, Agbanwe ọsọ propela na ụlọ elu ahu.
Sistemụ nchekwa Weyer dị ka oke na ụdị njikọ njikọ niile na-echekwa ụdị igwe ọ bụla na ụlọ ọrụ a. Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Port Facility, ụtaba igwe, ọgwụ igwe, n'ibu igwe, na igwe ngwá ọrụ wdg
Igwe ọkụ ụlọ ọrụ bụkwa ụlọ ọrụ anyị dị mkpa anyị na-etinye na ya. Ngwaahịa Weyer nwere afọ ojuju ọtụtụ ndị ahịa anyị na mpaghara dị iche iche maka iji Lighting. Anyị e mere pụrụ iche na ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka elu okpomọkụ conduits na glands, mgbochi ọkụ V0 ngwaahịa na Okpomọkụ ịka nká tubings dị ka ọkọlọtọ OC / T29106
Ọ bụghị nanị na a na-eji usoro nchebe Weyer n'ọtụtụ ebe na eletriki eletriki na-agbakọta, kamakwa n'ọtụtụ usoro mmepụta akpaka na ígwè ọrụ ntanetị. Uzo zuru oke nke uzo na njikọta nwere ike izute ihe ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ. Glands anyị agabigala asambodo ATEX & IECEx maka mpaghara dị egwu.
Ugbu a ọ bụ oge 5G. Anyị na-edebe oge. Weyer polyamide tubings na ikuku ikuku ikuku nwere ike izute ihe ndị chọrọ nkwukọrịta. Ebe obibi anyị nwere ike ime ka ikuku dị elu dị elu iji dozie ikuku dị ọkụ na ikuku oyi n'ime ma ọ bụ n'èzí igbe ma nwee ike ichebe eriri megide mmiri na ájá (IP67).